रास्ट्र निर्माताको प्रतिमामा १०८ मिटर लामो माला चढाएर सम्मान गरियो – ekoshi.com
रास्ट्र निर्माताको प्रतिमामा १०८ मिटर लामो माला चढाएर सम्मान गरियो
काठमाडौँ, २७ पुस । शिव सेना नेपालले राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सिंहदरबारस्थित सालिकमा आज १०८ मिटर लामो माला चढाएको छ ।
तत्कालीन समयमा विभिन्न भागमा छरिएको भू–भागलाई शाहले एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माणमा योगदान गरेको स्मरणमा शिव सेना नेपालद्वारा उहाँको २५५ औँ जन्मजयन्ती मनाएको हो ।
विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले समेत उहाँको सालिकमा फूल गुच्छा चढाएर उहाँको योगदानको चर्चा गरेका थिए ।
गोर्खा समाजले शाहको तस्बिरलाई गाडीमा सजाएर नगरका विभिन्न स्थान परिक्रमा गराई सिंहदरबार ल्याएर माल्यार्पण गरेको थियो ।
सो समाजको सहयोगमा नेपाल प्रहरीले बाजा बजाएर पृथ्वीनारायण शाहलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि दिएका थिए । समाजका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र देवकोटाले पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरिदिएको मुलुकमा बस्ने नेपालीले उहाँलाई आदर गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रुपमा मान्नपर्ने बताए ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले आधुनिक नेपालको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहले जीवन समर्पण गरेको विचार व्यक्त गर्दै उहाँको सम्मानमा राष्ट्रले औपचारिक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वमन्त्री सुनिल थापाले नेपालीले सदैव पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरणमा खेलेको भूमिकालाई स्मरण गरी सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
शिवसेना नेपाललका अध्यक्ष अनिल बस्नेतले पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई ओझेलमा पार्ने कार्य भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले पृथ्वीनारायण शाहलाई अनादरगर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्वलाई चुनौती दिनु सरह हुने बताए ।रासस
राष्ट्रिय समाचार 2017-01-11
सम्बन्धित समाचार प्रचण्ड सरकारले संघियता फाल्न खोज्दैछ -यादब
मोर्चाको कारणले गर्दा चुनावको मिति घोषणा हुन सकेन
पाप धुरीबाट कराउछ
टुङ्गिएन राज्यकोषको सुविधासम्बन्धी बहस
जनताको काम नगर्ने मन्त्रीहरुको नामै सार्वजनिक गर्ने भन्दै रबिले गरे कठोर प्रतिज्ञा (भिडियो)
आजको सिधाकुरा जनतासँग ३० रबिलाई नै विशेष लाग्यो भने पछि कस्तो दमदार होला ? विमानस्थलमा लगेजबाट गहना चोरी भो प्रमाण सहित बोले रविले भागेको पोल्ट्री ...